Author: Gardamuro Fezuru
Tabayadii Dambeyn Sayidka Maxamed geeridiisa waxaa laga joogaa 95 sano, dadkii uu Sayidka dagaalka kula jiray Muqdisho ayey nala joogaan, Caddaankii waxaa ay noqdeen Saxiib halka Madowgii isku badaleen Walaal. Ninka yiri sayidkaa baan gani Daraawiish labaatan sano ayey duurka ku jirtay, mar la jabiyo iyo marar ay guulaystaan, Xabashi, Ingiriis iyo Talyaani intaba foodda ayey is-dareen, heshiisyo badan ayey galeen, dhamaan guuldaro ayey ku dhamaadeen.
Taasna waxaa u aqoonsan dadkiisa iyo dadyowga kale markay satidka sugnaatay inuu ahaa geesi waddani ah, gabyaa aftahan ah, buuni cilmi leh, siyaasi xirribbo badan.
Xaaji Maxamed ayuu dalka dib ugu soo laabtay, markii uu dalka soo cago dhigtay, Berbera ayuu Ingiriis Cashuur ugu diiday, isagoo kor u qeyliyay kuna afceliyay ninkii Caddaanka ahaa, wuxuuna ugu jawaabay: Mawdku ka adeegi Dawlada Ingiriisku waxay isku dayday inay Sayidka kula isticmaasho siyaasad la mid ah tii boqoradii Hindida ay kula dhaqantay oo ah inay maal badan iyo mushaaro joogta ah siiso.
Ararsame dalkiisii ka carar Ninkii diday ayaantii Marka waxbarasho guud mooyee, waxay gabayadu albaab weyn u furayaan qoraalka suugaanta af-Soomaaligu hodonka ku yahay. Software ama buug inaad ka dhigtaan talo ahaan aad bay u fiicnaan lahayd. Malaw ii soo godol Ugu dambayntii waxaa Sayidka lagu soo kacshay dayuuraadka dagaalka waxaana weeraradaa hogaaminayey Dhame Duuliye Gordon wuxuuna cadowgu isticmaalayey diyaaradaha noocoodu ahaa DH9, waxayna duqeeyeen Taleex, Jiidali iyo xarumihii Sayidka oo dhan.
November 27, Asc… Aad baad ugu mahadsan tihiin sida xilkasnimada ah ee aad diiwaan ugu samayseen halyeeygii Soomaaliyeed Sayid Maxamed maasha-Allaah, waa dhaxal wanaagsan oo bulshada Soomaalida iyo guud ahaan reer Afrika ku faani karaan.
Doodna waxaan u leeyahay Ma duqaynay reer Bari Baqalka kuugu soo diray Fadlan walaalayaal iyagoo video lagu luuqadaynayana noo raadiya, gabayada Sayidka aad baan u jeclahay waana dhagaystaa in badan intaan ka hayo. Sayid Maxamed wuxuu ka mid yahay abwaannada waaweyn ee taariikhda Soomaalida meel ka galay.
Gabayada Sayidka APK
Xuseenow tabtaan ahay Cara e yaa sheega! Mar baan soo gelinnay, laakin khaladaad badan baa ku jiray. Aad baad u mahadsan tihiin sida quruxda badan ee noogu soo dhigteen gabayada Sayidka. Ingiriiska intii ay socdeen labadii duulimaad ee horre waxaa u korodhay waayo-aragnimo dheeraad gabayadil waxayna ogaadeen xoogga Daraawiishta oo ah mid aan dhayal loo loodin karin.
Kuwaas oo buuggan ka heli doona tusaalooyin badan oo waxtar u leh. Dhabdarrada ma qaayibo Notify me of new posts by email.
Diiwaankan waxaa ku qoran gabay oo Sayid Maxamed tiriyey intii u dhexeysay tii — kii, iyo 16 gabay oo gabayada Sayidka xiriir la leh. Gabayadaan in la ilaaliyo waa shay qaali ah. Rabbaa deeq leh Ina Caliga Dhaaranahayaa Waxaan halkan uga baahanahay in aan helo gabayadan oo lagu luuqaynayo. Mahadsanid mar kale sidaad ugu hagar baxdeen qoraalka Diiwaanka Gabayada Sayidka. August 18, June 5, Ragga Ayl u kacahayow 5.
Diiwaanka gabayadii Sayid Maxamad Cabdille Xasan | Abdulkadir Hoshes –
Haasaawe layskuma xanto November 8, 62 Like. Sayid baa ka baqay Leave a Reply Cancel reply Your email address will not be published.
Maamule waxaan u malaynayaa in aan wali pdf kii buugan web soo galin. Jigta weerar bay goor barqaa nagu jiteeeyeen dheh Anigana jikrey ila heleen shalay jihaadkii dheh Jeeniga hortiisey rasaas, igaga jiideen dheh.
Aad iyo aad ayaan uga mahadcelinayaa walaalaha soo celiyay xikmadihii Sayidka Waad ku mahadsan tihiin dadaalka aad ugasheen noolaynta taariikhda Sayidka iyo uruurinta gabayadiisa. Dagaallada caanka ah ee dhacay waxaa ka mid ahaa dagaalkii lagu dilay taliyihii ciidamada Ingiriiska Richard Corfield, gaalkaasi oo Soomalidu u taqaanay Koofil ahaana ninkii Sayidku ka tiriyey gabaygii caanka gaabayadii, ee Gabaadii Koofiloow Jiitayoon.
Caliyow calaacal iyo way Jiidaha xanuunka leh markii la igu jeeraarshey Jibaadka iga soo baxay dadkii jiifka qaban waa dheh Markay rubaddu jaw tiri or bay iga ag jiibsheen dheh.
Adaa mudan walaal… waad ku mahadsan tahay soo booqashada aad nasoo booqatay…. Aad ayaad umahadsan tihiin walaalayaal bahda soo tabisay gabayadaan waan jeclaan lahaa inaad ku soo dartaan gabay hooyo wiilkeeda uqaadi.
Dacwad baan ka leeyahay Adaa mudan, walaal Mukhtaar… Waa talo fiicaan, akhristayaasha qaarna ay gzbayadii jeediyeen, waana isku dayeynaa inaan buug walba isagoo isku dhafan soo gelinno…. Xuseenow caqligu kaama baxo Afbakayle 2.